Chii chinonzi PrestaShop? ayo makuru maficha uye mashandiro | ECommerce nhau
Chii chinonzi PrestaShop?
PrestaShop yezvitoro zviripo, inzvimbo inozivikanwa yeEcommerce. E-commerce gore rega rega inoverengera yakakwira muzana mari yekutengesa kutenderera pasirese.
Chero zvazvingaitika, uye kunyangwe paine boom iyi, zvitoro zvepamhepo zvinofanirwa kutarisana nematambudziko akasiyana uye anoenderera kana vachida kupona mumakwikwi akasimba aripo. Zvitsaurire iwe kubva kune vamwe uye wedzera shanduko icho chinangwa uye chinetso kune ese e-commerce saiti.
Nzvimbo yacho yeEcommerce iyo inogara ichisarudzwa ichaita mutsauko, PrestaShop inomira nhasi seimwe yeiyo inonyanya kufarirwa yakaiswa.
Dzimwe nzira dzinogona kuve WooCommerce, Magento, uye OpenCart.
Kune makambani madiki uye makuru, kana chero ani zvake anoda kubata chitoro chepamhepo kana chitoro chepamhepo Prestashop Chemhondoro yemahara chikuva Ichazvitendera nezvakanaka mabhenefiti nemhedzisiro
1.0.1 Inobatanidza mabasa akadai se:
2 Catalog - PrestaShop Kutungamira
3 Zvikamu muPrestaShop
4 Chigadzirwa - Ratidza muPrestaShop
5 Mitengo inoshanda muPrestaShop
6 Saiti - PrestaShop Administration
7 Tsvaga Engines - Optimization yePrestaShop
8 Checkout peji
9 Kutumira muPrestaShop
10.1 Dzinomira senzira yekubhadhara.
11 Kushambadzira muPrestaShop
12 Mutengi anopinda
14 PrestaShop chengetedzo
16 Mishumo uye Ongororo
17 Prestashop Multi-chitoro Kutungamira
Ndicho simba remukati maneja uye yemahara software naiye ndiani zvinogoneka kuvaka chitoro kubva pakutanga.
Mushure mekuvhurwa zvichave nyore kuipfumisa nema module uye madingindira pasi pezvekutengesa marezinesi uye mune dzakawanda kesi mahara.
Kubva 2007, infinities emabhizimusi mune network vanoshandisa chikuva ichi uye tengesa zvigadzirwa zvemadhijitari kana zvepanyama Kubudikidza naro, chiyero chakadai chekukura chakawana izvo kupfuura 300.000 zvitoro zvinoshanda neCMS iyi.
Ipuratifomu inobvumidza vatengi kuona mune dzakasiyana sarudzo zvigadzirwa zvavanoda kana avo vakasarudzwa kutenga.
Inobatanidza mabasa akadai se:
Rondedzera mharidzo uye kuongorora
Pakazara pane zvinopfuura mazana matatu nemakumi matatu emabasa akabatanidzwa
Izvo zvinotokwanisika nepuratifomu yekuita yakasarudzika yakasarudzika uye kugadzirisa kune imwe chaiyo bhizinesi maitiro.
Catalog - PrestaShop Kutungamira
Zvichakwanisika kuve ne simba chigadzirwa chinyorwa zvisinei nekuti mangani eaya aripo. A kuunganidza kwakaoma uye nekugadzirisa zviri nyore. Iyo ine kugona kwe seta hunhu, wedzera kuderedzwa, kupinza uye kutumira kunze nekukurumidza uye kupatsanura zvigadzirwa.
Zvingadaro famba marara, tora zviziviso zvekuzadza, uve nehunhu husingagumi (mavara, saizi, nezvimwewo), gadzirisa kudzikira kwemitengo muzana uye muhuwandu hwakatarwa, muve nemareisiti ekutakura uye mavovhoisi muPDF fomati, kutengesa muchinjikwa nekutungamira kwevatengesi.
Izvo zvikamu zvakakosha kwazvo kuti zvibudirire kusiyanisa zvigadzirwa izvo zviripo kuti zvitengeswe muEcommerce, saka zviri pachena kuti zvakakosha muchitoro. Kubva kuhofisi yekumashure yewebhu manejimendi iyi inogoneka.
Ichave nekwanisi yeku gadzira muti we "zvikamu - subcategories", Kugadzira chikamu chemberi pamberi, izvo zvichave zvakakosha kugadzira mamwe marudzi mukati meizvi.
Chigadzirwa - Ratidza muPrestaShop
Icharatidza zvigadzirwa zvakasiyana munzira inoshamisa, nemhando dzakasiyana dzekuratidzira. Akawanda mhando dzemifananidzo nezvigadzirwa, otomatiki resizing uye Zoom-in.
Mutengo wekuratidzira uine kana usina VAT, inoratidza zvirimo muBhasikiti, makadhi ekudhinda uye kuratidza zvigadzirwa mumapoka akafanana.
Icharerutsa sarudzo yehuwandu hwezvigadzirwa zvinofanirwa kuratidzwa pane peji, zviwedzere kune yechipo chinyorwa uye nezvimwe zvinoshanda mune izvi.
Mitengo inoshanda muPrestaShop
Ivo vanogona kupihwa yakagadziridzwa mitengo nemitero kune chimwe nechimwe chigadzirwa. Nekwaniso yekusarudzwa nenyika, zvikamu, mapoka evatengi kana vamwe vatengi vanosarudzwa.
Vanogona kuiswa kana kupihwa kukanganisa nehuwandu kana muzana yemutengo wechigadzirwa.
Saiti - PrestaShop Administration
Kugadzirisa saiti nepuratifomu iyi zviri nyore. Chengetedza chitoro chinomhanya pane yazvino vhezheni ye kugadzirisa kuri mukati mekusvikwa ne "bhatani".
E-mail inogona kutumirwa kuburikidza ne Fomu Rekutaura.
Simbisa zvigadzirwa pane peji rekutanga, uine fomu yekubatana mune akasiyana masosi, edza peji nyowani usati watanga.
Wona account yevatengi.
Iva nema module ekupinza zvitoro.
Bhokisi rekuratidzira kushambadza uye sarudzo dzekuisa kushambadzira mireza.
Tsvaga Engines - Optimization yePrestaShop
Zvichakwanisika kukwidziridza peji racho kuitira kuti injini dzekutsvaga dzakakosha mu network dzingasanganisira chitoro, zvichibvumira kuwedzera iyo pamhepo traffic mikana.
Nezvivakwa zvinoshamisa zve kugadzirisa zvigadzirwa tag, zita rekumaka, meta tsananguro uye meta tag.
Mikana yekuwana a Yega-inogadzira sitemap, izwi gore uye mamwe mashandiro.
Kuverenga pane a peji rinoshanda rekupedzisa kutenga, chiyero chepamusoro chekushandurwa chinogona kuwanikwa.
Iyi puratifomu ichave ichipa kutengwa kwekupedzisa pane imwechete peji, iyo ichagadzira iyo chiitiko chiri nyore kune vashandisi.
Minda inogona kunge iri tsika yekutora iyo inodiwa ruzivo. Saizvozvo, chikuva chinopa mikana yekuvandudza yakakosha zvipo, zvipo zvinoputira uye zvinokwanisika kuisa mamiriro ekutengesa pakupera kwekutenga.
Nekuvapo kwemamoduleti ekutumira, chikuva chakanyatso kubatanidzwa nevatakuri vanonyanya kukosha, zvichipa vatengi sarudzo dze Kutendeseka kutendeseka nepakeji yekutevera nzvimbo.
Iwe unozogona kudzora huremu, mhosva uye mitero yekutumira. Kazhinji, pachave nenzvimbo dzisingagumi uye vatakuri, zvakare yekupedzisira nenzvimbo.
A ziviso yekutumirwa neemail uye kuenzanisa kwemitengo yakafanana, mari yekubata nezvimwe.
Iyo chikuva ine kusangana ne dzakasiyana siyana dzekubhadhara, iripo mukana wekumuisa zviri nyore kwazvo. Zvichakwanisika kugadzirisa kuti mubhadharo watambirwa, sezvo pachave nechaiko mhinduro nemutengi kuburikidza nekupihwa kweruzivo.
Dzinomira senzira yekubhadhara.
Authorize.net nemamwe akakodzera.
Zvichakwanisika kugadzira mitemo yemitero nemitero inochengetwa nenyika, matunhu, matunhu nezvimwe.
Sarudzo dzekubhadhara hadzina parinogumira pamwe nekuchinjiswa kwebhangi uye macheki.
ari kushambadzira uye zvekusimudzira maturusi izvo Prestashop muridzi zvave zvichikwanisika kwazvo.
Vashanyi vanogona kudzoreredzwa, zvinopa mukana wekutumira zvigadzirwa kunze kwekutsvaga injini.
Kuburitsa zvigadzirwa ku eBay
Google Adwords kusangana
Chigadzirwa mharidzo mavhidhiyo
Munguva ichangopfuura inoonekwa zvigadzirwa zvigadzirwa
Zvirongwa zvekubatana uye zvimwe zvekusimudzira maturusi
Iyo inonyatsokwanisa kuburikidza ne Prestashop kupa mutengi ne ane hushamwari kwazvo uye nyore kupinda, neakaundi account uye nemikana yekugadzira mameseji zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo.
Rarama hurukuro, kutumira mameseji kuburikidza nemaakaundi uye zvimwe zvivakwa.
Kune zvakawanda kupfuura 40 shanduro dziripo. Nharaunda yePrestaShop padanho repasirese inowedzerwa kunopfuura nyika zana nemakumi mashanu.
Chitoro chinogona kuturikirwa mumitauro isingaverengeke, iyo inokanganisa chiitiko chevashandisi pamwe nekutengesa kwese kunogona kuwanikwa.
Chikuva chinotendera kutumira kunze uye kupinza kwepakeji ekushandura, ine zvishandiso zvekushandura zviri pamhepo uye kutsunga kwenzvimbo.
Prestashop inobata a chengetedza kubatana, iyo yakakosha mukugadzirisa kutenga pamhepo, pamwe nekuteerera kubva kuPCI kuenda kuSSL.
Iyo inosimbisa mvumo dzekuchengetedza kune vashandisi, ine password kupera uye kuvharira zvakafanana mushure mekudzokorora kudzokorora kuyedza. Iyo zvakare inonyora makuki uye mapassword. Unogona kuteedzera kubiridzira uye kuva nehofisi yekumashure ine chengetedzo yakanaka kwazvo.
Inopa maitiro ekutarisa pamwe nemukana wekuona nzvimbo yemutengi, kuverenga yakatarwa mitero. Iyo yekutsinhana mwero kumisikidzwa uye mukana wekuti mutengi asarudze mari yaanoda inovimbiswa.
Mupfungwa iyi, chikuva chinotendera kuenzanisira kwemitengo yekutsinhana, fomati yemari, mwero usingagumi, nezvimwe
Mishumo uye Ongororo
Kuti uwane kuongorora kutengesa uye uve nedatha maererano nekubatana kwevashanyi vechitoro, zvese kuitira kuti vatungamire kufambira mberi kwekuedza uye vanzwisise izvo izvo izvo izvo zvinoshandiswa nevashandisi uye zvavanotsvaga; mishumo yakakwana ichagara ichidikanwa mune izvi.
Inotendera a chiitiko chekutevera yakaitwa nevashanyi muchitoro uye icharatidza iwo maficha evatengi vakasarudzwa.
Icharerutsa kuziviswa kwenhau dzepuratifomu muhofisi yekumashure, zvakare ine kusangana neGoogle Analytics.
Iwe unogona kuvandudza ne Prestashop manejimendi emapeji asina kuwanikwa uye uwane kiyi yemishumo mishumo. Kubudikidza nepuratifomu iwe uchave uchikwanisa kutsvaga kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinonyatsoita, shanduko yemitengo nechikamu, nezvimwe.
Prestashop Multi-chitoro Kutungamira
Izvo zvinobvumidza akasiyana online zvitoro kutarisirwa zvisineyi saizi yavo kana chiyero, zvese kutanga kubva kune imwechete Dhairekitori interface kana Back Office ine inoshanda kwazvo simba.
Iyo inofambisa manejimendi katarogu kungave nechitoro kana boka reizvi, ine template kune yega yega kunyanya uye yakaparadzaniswa kana yakagovaniswa masheya mumapoka, zvakare akapatsanura kana akagovana maodha uye ngoro dzekutenga.
Vatengi maakaunzi anogona zvakare kugoverwa kana kupatsanurwa mumapoka ezvitoro. Chikuva chichasiya dzokorora chitoro tsika kupinza kumisikidza kweimwe.
Iwe unogona kunge uine chaiyo URL kana kero yeWebhu kune yega yega yezvitoro, nenzira iyi iwe unogona kufunga nezvezvinhu zvakaita semutauro, mudzi wechikamu, mari, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Chii chinonzi PrestaShop?
Carlos Aguirre chinobata mufananidzo akadaro
Ruzivo rwakanaka kwazvo, kambani yakandibatsira muchitoro changu chepamhepo imwe iri kuSpain inonzi Mitsoftware, basa ravo iguru, ini ndaingofanirwa kugadzira vatengi vangu nekutengesa, izvo zvatova zvekambani yangu, asi ravo rakanaka basa
Pindura Carlos Aguirre
Shopify kana PrestaShop, iyo chikuva chiri nani kune yako ecommerce
Maitiro ekudzima makuki kubva kuGoogle Chrome